Umhla My Pet » Amanyathelo Ten ukusingatha Singles ezithandwayo Party
ngokuthi belinguYerusha Stewart
Amanyathelo Ten ukusingatha Singles ezithandwayo Party
ukubuyekezwa: UCanzibe. 23 2020 | 4 min ukufunda
The #1 Isikhalazo uphuhlisa ezindaweni apho esiya kumkhawulela umntu omtsha. Nokuba sele 25 okanye 65, uphuhlisa zisoloko ndikhangele iindawo ukuba udibana nabantu besini esahlukileyo ngaphaya lomboniso bar. Landela la manyathelo ukuba nokuphosa kwenzeka iqela indlu kwaye ulungise iqonga ukuze enye zo obangel '.
1. Umhla: iindibano evekini ukuba PrEP omkhulu fun veki. Inika iindwendwe ithuba ukwenza abahlobo abatsha imisebenzi elizayo. amaqela Weekend 'a ebusuku umhla’ lweveki uphuhlisa. Zilungiselele ukuba ukuhlangabezana nokulindelweyo ephakamileyo ngenxa romance. Esiba balindele phakathi kwezini kuyitsala bar kwaye chemistry ngesondo iqela lakho.
2. Isimemo: Email de rigueur ngenxa isihlwele namhlanje neqela kodwa nto yodlula VIP nokuphosa isimemo yesiko kweintanethi ekwakheni uchulumanco. Kuxhomekeke kubukhulu iqela ungasebenzisa umxube zombini. Yenza yoshicilelo umema iziqalelo ebangel ebusuku ukuza. Umzekelo ubuyokoyoko nosuku lweValentina, beka isithsaba iphepha igolide isimemo setheko elishicilelwe nebomvu ngaphakathi ebomvu iibhokisi ngefoyile iintliziyo. Utayi iribhoni baba kunye nedilesi ngamnye 'nguKumkani’ okanye 'uKumkanikazi Iintliziyo.’
Yiya glam iibhokisi babhayo ukusuka evenkileni emileyo basekuhlaleni ezaliswe ngabantu ijikeleze engaxabisi, nephepha elinqunqiweyo ngokushiyanayo ebuntsimbi, kunye neenkcukacha zomntu. Cela iindwendwe ukufika enehlala lelabhastile othululwayo bawathandayo 'uncork indonwabisa.’
Okanye a cinco de Mayo iqela ukuthenga iminqwazi amancinci
uqhoboshele tag esifundeka kwicala elinye 'Musa ukugcina oku phantsi umnqwazi wakho.’ Kwelinye icala tag, iinkcukacha iqela loshicilelo. Ukuba uyakwazi esandleni ukunikezela uyanimema ezimbalwa, ukusebenzisa toppers ubungakanani ngokupheleleyo kwaye bameme iindwendwe ukunxiba ukuba esi sihlandlo.
Sebenzisa inkonzo intanethi ezifana Evite.com ekusasazeni umyalezo virally iindibano ezinkulu.
Musa ukulibala ukulandela kunye ukufowuna ukufumana ezichanekileyo yeendwendwe lwamajoni ukugqithisa iinkcukacha ngomzuzu wokugqibela.
3. uLuhlu: Ngubani ya gonna kumema. Kuxhomekeke kubukhulu isithuba kwaye amava ufuna ukwenza. Mema inani ubambe isithuba kunye 20% ukuphumeza ndandithabatheka mnandi. Ukuba ziyangqubana umntu amehlo akho kumkhawulela kwaye kufuneka athethe into. Ummi 'Molo’ na umgca zagqwesa omashini. Plan zenziwe iindwendwe kuma kuthelekiswa sit, yenza ukudibana lwenza lula. Ingaba into placed izitulo iincoko senithandana. Akufuni iindwendwe wesihloko lokulala wakho uncokola senithandana.
Gcina amanani besini esahlukileyo wada kangangoko kodwa musa agxininise phandle kakhulu. Khumbula abafazi bayathanda ukuba ziphendule kwangethuba. Amadoda amaninzi musani ukwenza izicwangciso kude kube ngumzuzu wokugqibela kangaka ukulindela testosterone lokunyuka imini beqela. Khuthaza abahlobo ukuba bameme abanye abahlobo babo omnye uzalise amanani.
4. Imeko: Yenza valentines va-va-va-voom umthande fest ngeemilo ndiyazingca ebomvu, mfusa, okanye pink. Tsiba iintliziyo zemveli kunye neentyatyambo. Zalisa ingqayi ezinkulu zeglasi kunye boas iintsiba kunye ticklers iintsiba. eprintiweyo saa teasers ezifana: 'Tickle kum', 'Yiza Dlala Dress Up', 'Yisole phezu Boa', 'Flirt Like Uthetha ukuba’ kwaye badanise Me’ kufuphi isipili votives nekhandlela ngeenxa igumbi.
5. I.D. kufunwa: Kwenza kube lula ukuba abantu ukuhlangabezana – ukudala iibheji igama besini ukusuka amaqhosha blank ziprintwe amabinzana anomtsalane ezifana 'Ngaba ____ ukutya’ , 'Kuba Ngobunye ubusuku Kuphela uyakuthi ______’ , 'Dibana nam, Mna _______’ 'Ngaba ngudlalani ukuba _____’ '_____ Bafuna enye.’ Yiba iindwendwe uzalise izikhewu ubhale igama lakhe kunye namagosa amakishayo esisigxina. Okanye ukwenza lanyards yokupasa VIP kunye nomxholo iqela kunye nendawo ulwazi lwabo. Ngaba umsebenzi kabini njengoko njengesikhumbuzo elikhulu iqela.
Qiniseka ukwazisa iindwendwe omnye komnye nje befika n inkulu yokoyika uphuhlisa 'andiyi ndiyazi mntu.’
6. The Fun Factor: Icebreakers ziziintsika. Uphuhlisa basoloko kuba ilahleko amagama xa uzama ukuba benze ezinye uphuhlisa. Banike into ukuthetha. Ukuba ingaba umxholo 'Ukudlala yokuzonwabisa’ uze uhombise iindonga ngeemakhishithi Ukuziluma neeplanga abadibeneyo. Kwaye icebreaker ifuna iindwendwe ukuba 'ukwenza intshukumo yabo’ ngokuqokelela iimpawu umdlalo kwezinye partygoers.
Okanye 'uphuhlisa kuxakekiwe’ apho umntu ngamnye ufumana ikhadi umdlalo kunye iinyani ezinika umdla malunga kweendwendwe. Unqontsonqa umdlalo kukufumana umntu obufanela inkcazo ebhodini. Winner lugubungela ibhodi zabo lotyikityo.
Okanye anike kukhona 'yemveli’ inqoba kunye nezitshixo game sizijije. Thatha izikhonkwane iponti kunye nezitshixo kwivenkile iintsimbi ekuhlaleni kwakho. Ndinike abafazi izikrufu namadoda nezitshixo ukubukela wesiphithiphithi kunye chemistry ukunyuka ngabanye zama ukufumana komdlalo wabo. Ngumoya wokhuphiswano usoloko kutsalela abantu.
7. isiselo: Yenza isiselo utyikityo. Yinto incoko usenokuqalisa olukhulu. Uthabatha umthwalo kunye kwindleko ye bar ngokupheleleyo ngaphandle komkhosi. Uyakwazi phola ndiwuqaba kwangethuba kwi zeebhekile. Fumana ingqokelela zemibalabala ice emele lungangadli mali ininzi kwaye ke iindwendwe ukongeza ice kunye kuwakhonzisa. Qiniseka ukuba ukushicilela up amakhadi iresipi ethululwayo abo bafuna kuva ngokuhlwa ekhaya. Kwaye emva ngxolo lopolitiko ukuba ukukhankanya ngobukrelekrele yakho bartending.
8. Ukutya: Yenza eyakho yenye indlela elula ukuba nenekazi kunye izimvo lokutya yeyona fun. Ingaba iindwendwe ukuba ukuqhelanisa ezabo kabobs zabo shish, ulisonge ukutya umnwe, okanye sundaes ice cream, ukuthini umsebenzi ngaphantsi wena intsebenziswano ngakumbi kubo njengoko bethelekisa namanqaku ngendalo zabo.
placed mini-ukulunywa lonke igumbi kwakhona ezinkulu uphuhlisa ukudibana. Enoba abalambileyo bona, azinayo ukwaphula unodibaniso kakhulu ukuba ngeqhekeza okunencasa ayikho kude kakhulu. Kwakhona ukuba ngoku uziva imfuneko kusinda incoko, enza babaleka ngenxa dessert etafileni lonke igumbi yiyiphi, singcamle.
9. kwezoMculo: Ncokola kulawulo isandi. Sokumpompa i umqulu kufika kuqala. Umculo luzalise indawo engenanto ugcine iindwendwe kwangoko layeka ukuba iqela esingaqalwanga kodwa. Njengoko amanani ukwandisa qinisekisa uvula phantsi umthamo. Kufuneka uzive imfuneko akhuphisane umculo xa yayingena olukhulu.
Ukutsiba uyaxinga olucothayo egameni beats up-isantya. Nokuba ukuba akuyi kudanisa indawo iguquguquka encinane emanqeni eyenza imilebe wonke khangela nomtsalane ngakumbi engeneka.
10. uxela: Yenza Uqinisekile umelwe kwiphepha elingabhalwanga neentlanti yobuchule kuyo yonke indawo. Akukho nto imbi ngaphezu ekugqibeleni apho kwaye ungabinayo izixhobo ezifanelekileyo yokutywina makanenzele. neendwendwe zakho cwaka enkosi ngokuba banyameke kangaka.
ibhonasi: Emva Party Scene: Zilungiselele kwintsimi itoti-nawe-fumana-kum-okanye--inombolo yakhe iiposi ilizwi. neendwendwe zakho ngokuqinisekileyo uya kukuphosa indima yakho entsha lokudibanisa. Unakho ukudlala Ejongene nezokuxhumana udlule imiyalezo ecaleni kodwa akanakuthetha iindwendwe’ inkcazelo yobuqu enoba ezithile wena amaqela bebanye.